အကြားအာရုံအကြောင်းသိရှိရန် ဘယ်လိုအကူအညီရယူမလဲ မိမိရဲ့ မိသားစုဝင်ကိုယ်တိုင်က အကြားအာရုံစွမ်းရည် လျော့နေကြောင်း သတိမထား /လက်မခံခြင်း
နားသိပ်မကြားရဘူး။ ဒါဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ?
ဘယ်ချိန်မှာ နားစမ်းသပ်ဖို့ လိုပြီလဲ။
နားကြားကိရိယာ အသစ် ဘယ်တော့ ပြောင်းသင့်လဲ?
သင့်တော်တဲ့ အကောင်းဆုံး နားစမ်းသပ်ခန်း ဘယ်လိုရွေးမလဲ။
ဘာလို့ နားကြားကိရိယာ အမျိုးအစားတွေ အရမ်းများတာလဲ။ လူတစ်ယောက်နဲ့
မိမိရဲ့ မိသားစုဝင်ကိုယ်တိုင်က အကြားအာရုံစွမ်းရည် လျော့နေကြောင်း သတိမထား /လက်မခံခြင်း
နားကြားကိရိယာတပ်သော်လည်း အဆင်မပြေ ၊ မကြားရဘူး။ အတွင်းနား အစားထိုးကိရိယာ တပ်ဆင်သင့်ပြီလား။
ဒါဆို မိမိ ချစ်ခင်ရသူကို ဘယ်လိုကူညီမလဲ ကြည့်ရအောင်..
ဥပမာ- သူကိုယ်တိုင်က အာရုံစိုက်နားထောင်မှ နည်းနည်းကြားရတာနဲ့ တီဗွီအကျယ်ကြီး ဖွင့်တာကို ပုံမှန်လို့ ထင်နေတာမျိုး
သူ့ကို ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ဒီမှာ ဖတ်ရှု့ကြည့်ပါ။
သင် သူ့အတွက် စိုးရိမ်ကြောင်း နဲ့ သူကောင်းဖို့အတွက် စေတနာနဲ့ ပြုလုပ်ပေးတာမျိုး သူသိအောင် ရှင်းပြပါ။
ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ အာရုံစိုက်နားထောင်ရကြောင်း မေးပါ။ပြီးတော့ တခြားမိသားစုဝင်တွေကို ခေါ်ပြီး သူတို့ရော အာရုံပိုစိုက်ရလား ၊ ပုံမှန်နားထောင်လို့ရလား ကွဲကွဲပြားပြား မေးပြပါ။
နားစမ်းသပ်ဖို့အတွက် သူနဲ့အတူ အဖော်လိုက်ပြီး အားပေးပါ။
ဖြစ်နေတဲ့ မိသားစုဝင် ကိုယ်တိုင်က လက်မခံခြင်း
ဥပမာ - ဖြစ်နေတဲ့သူကိုယ်တိုင်က တခြားသူတွေထက် ပိုအာရုံစိုက် နားထောင်နေရမှန်းသိတယ်။ဒါပေမယ့် နားလေးနေတယ်လို့ အပြောမခံသလို ဖြစ်နေတယ်လို့လည်း လက်မခံတာမျိုး
အကြားစွမ်းရည်လျော့လာတဲ့ လူတိုင်းလိုလို မိမိဖြစ်ကြောင်း အစပိုင်းမှာ လက်မခံတာမျိုးရှိတာကို နားလည်ထားပါ။ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အရင်တုန်းက တခြားသူတွေပြောသလိုမျိုး အသက်ကြီးရင် နားလေးသွားရော ဆိုတဲ့ မှားယွင်းတဲ့ အယူအဆမျိုးကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သင့်မိသားစုဝင်ဟာ တစ်ချို့သော အသံတွေ ကောင်းကောင်း ကြားရပါသေးတယ်။ဒါပေမယ့် မကြားရတာတွေလည်း ရှိလာပါတယ်။ ရိုးရိုးအသံကြားရတာနဲ့ အသံ/စကားသံ သဲသဲကွဲကွဲ ကြားရတာမတူကြောင်း သိထားသင့်ပါတယ်။
ဖစ်နိုင်ရင် ကျွန်တော်တို့ နားစမ်းသပ်ခန်းကို ခေါ်လာခဲ့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့က သီးခြားဆွေးနွေး အကြံပြုခြင်းတွေ ပေးနိုင်အောင် သေချာလေ့ကျင့် ထားပါတယ်။အရေးကြီးတာက အချိန်ပေးခိုင်းပြီး တစ်ခေါက်ကနေ သုံးခေါက်လောက် လာပြီး လက်ခံအောင် ဆွေးနွေးရပါမယ်။
သင့်မိသားစုဝင်က သူ့အကြားအာရုံလျော့နေမှန်းတော့ သိတယ်။ဒါပေမယ့် သက်သာအောင် လုပ်ဖို့ ငြင်းဆန်နေတယ်။
ဥပမာ - သူက နားကြပ်တပ်ပါလို့ အားလုံးက အကြံပေးရင်တောင် မတပ်ချင်တာမျိုး
သူ့ကို ခေါ်သွားပြီး နားကြားကိရိယာ အမျိုးအစား အစုံအလင် ပြပေးပါ။ နားကြားကိရိယာဆိုရင် အကြီးကြီး ၊ သူများမြင်ရင် ရှက်စရာကြီး ဆိုတဲ့ ရှေးရိုးစွဲကို ပျောက်အောင် ခေတ်မှီနားကြားကိရိယာ သေးသေးလေးတွေ ကို ပြပေးပါ။
အကယ်၍ ဈေးအရမ်းများနေမယ်ဆိုရင် ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ ၀န်းကျင်နဲ့ ကိုယ့်အတွက် သင့်တော်တဲ့ နားကြားကိရိယာကို ရွေးချယ်ဖို့ ကျွမ်းကျင်သော နားအကြားအာရုံပညာရှင် နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
ဖစ်နေတဲ့အကြားစွမ်းရည်လျော့နည်းတဲ့ ရောဂါ ကုလိုက်ရင် ရမယ့် အကျိုးကျေးဇူး နဲ့ ဒီတိုင်းထားရင် ဖြစ်လာမယ့် အကျိုးဆက်ကို ရှင်းပြပါ။
o	ပြုတ်ကျနိုင်တဲ့ အန္တရာယ် https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/802291
o	စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲလာမှု့ http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0119616
o	အသံဖြင့်မှတ်နိုင်စွမ်းရည် လျော့ကျလာခြင်း။ https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02724980443000151
အရေးကြီးဆုံးက ဒါမျိုး အကူအညီရှာပြီး သင့်မိသားစုဝင်ကို အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးတာဟာ စေတနာ မေတ္တာအရင်းခံကြောင်း နဲ့ စိတ်ညစ်စိတ်ရှုပ်လို့ လုပ်ပေးတာ မဟုတ်မှန်း သူ နားလည်ပါစေ။